1999 shirkadda ayaa la aasaasay
2003 Nidaamka Maareynta Tayada ee loo yaqaan 'ISO9001 Quality'
2005 La aasaasay shaybaarro casri ah oo heer sare ah
2008 Alaabtayadu waxay dhaaftay UL, CE
2009 Qiyaasta iibka sanadlaha ah ayaa ka badatay 100 milyan oo CNY markii ugu horeysay
2013 Nidaamka SAP ayaa la soo saaray, shirkaddu waxay gashay xilli cusub oo maareynta nidaamka ah
2014 La siiyay shirkad tiknoolajiyad sare leh iyo alaabo caan ah
2015 La helay IATF16949 Shahaadada Nidaamka; ku guuleystay cinwaanka "Sumcadda caanka ah ee Shanghai" iyo "Giant Teknolojiyada Yar"
2016 Dib-u-habeyn wadaag wadaag ah iyo qorshooyin lagu qoro ayaa la bilaabay. Weyer Sax Technology (Shanghai) Co., Ltd. la aasaasay.
2017 Unugga Ilbaxnimada ee Shanghai; Alaabtayadu way dhaaftay ATEX & IECEX
2018 Shahaadada Bulshada Qoondeynta DNV.GL; Weyer Precision ayaa la hawl geliyey
2019 20 sano guuradii WEYER
Waxaa la aasaasay 1999, Shanghai Weyer Electric Co., Ltd. waa shirkad tiknoolajiyad sare leh oo ku takhasustay soo saarista qanjidhada xargaha, tuubbada iyo qalabka tuubbada, silsiladaha fiilooyinka iyo isku xirayaasha fiilooyinka. Waxaan nahay adeeg bixiyaha xalka nidaamka ilaalinta, ilaaliya fiilooyinka meelaha sida gawaarida cusub ee tamarta, tareenka, aerospace qalabka, aalado, aaladaha dhalinta tamarta dabaysha, qalabka farsamada, mashiinada dhismaha, qalabka korontada, nalalka, wiishashka iwm 20 sano oo waayo-aragnimo ah oo loogu talagalay nidaamka ilaalinta fiilada, WEYER waxay ku guuleysatay sumcadda macaamiisha iyo isticmaaleyaasha dhammaadka ah ee dal iyo dibad.
Tayadu waa qayb muhiim ka ah falsafadda shirkadaha ee WEYER. Waxaan leenahay koox tayo sare leh oo tayo sare leh oo tijaabisa si joogto ah oo aan kala sooc lahayn alaabada shaybaarkayaga caalamiga ah. Waxaan dammaanad ka qaadaynaa tayada wax soo saarkayaga sida caadiga ah loo isticmaalo oo waxaan siinnaa adeegga degdegga ah ee loogu talagalay dayactirka alaabada. Maaraynta tayadayadu waa la caddeeyay iyadoo loo eegayo ISO9001 & IATF16949.
Tiknoolajiyaddu waxay horseedaa hal-abuurnimo. Waxaan si joogto ah u horumarineynaa oo aan maal-gashanaa wax soo saar, wax soo saar cusub, mashiin iyo tikniyoolajiyad. Waxaan haynaa koox xoog leh oo R & D ah si loo abuuro xalal naqshadeyn cusub si looga caawiyo dhamaadka isticmaalayaasha ilaalinta amniga fiilooyinka iyo ku darista faa'iidooyinka dhaqaale. Waxaan sidoo kale haynaa koox xirfad-yaqaanno ah oo cusbooneysiiya qaab-dhismeedka qaab-dhismeedkeena iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyada ugu dambeysa ee loogu talagalay hagaajinta tayada wax soo saarka iyo yareynta qiimaha.
Weyer wuxuu leeyahay fikrad adeeg sare ah: isku day intii karaankeenna ah si aan macaamiisha ugu siino adeegyo kala duwan, summadayn iyo adeegyo degdeg ah. Weyer wuxuu had iyo jeer bixiyaa xalka ugu fiican ee mashruuca si loo sameeyo nidaamka ilaalinta ee saxda ah. Weyer wuxuu had iyo jeer bixiyaa waqtiga si loo daboolo shuruudaha macaamiisha. Weyer had iyo jeer waxay siisaa adeeg hufan kadib adeegga loogu talagalay rakibidda iyo dayactirka.
1. Mashiinka duritaanka
2. Xarunta Quudinta Maaddada
3. Mashiinka Waxsoosaarka Birta
4. Mashiinka Caaryada
5. Aagga Kaydinta
6. Aagga Kaydinta 2